Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Na-ekele Chineke -> Ezigbo agwa
Ezigbo agwa: [Na-ekele Chineke]
Na-anọgidenụ nꞌekpere. Nọọkwanụ na nche mgbe unu na-ekpe ekpere, ma na-ekelekwanụ Chineke ekele.
2 KỌRINT 2:14-15
 Ma ekele dịrị Chineke, onye naedugharị anyị na-enye anyị mmeri, nꞌihi njikọ e jikọtara anyị na Kraịst. Ekele dịkwara Chineke onye na-eji anyị arụ ọrụ, ime ka onye ọ bụlạ nụrụ isisi ụtọ nke ozi ọma Kraịst. Nꞌihi na nꞌetiti ndị ahụ Chineke na-azọpụta na nꞌetiti ndị ahụ na-ala nꞌiyi, anyị dị ka ụda na-esi isi ụtọ nke Kraịst naachụrụ Chineke.
 Ka udo ahụ Chineke na-enye bụrụ ihe ga-adị nꞌobi unu, ma pụtakwa ìhè na ndụ unu. Nꞌihi na ebe unu bụ akụkụ nke otu anụ ahụ ahụ, Chineke kpọrọ unu ka unu nọdụ nꞌudo. Mgbe nile kwa nọọnụ na-ekele Chineke ekele. Kwerenụ ka okwu Kraịst nwee ọnọdụ nꞌime unu, ime unu ndị bara ụba nꞌamamihe. Zikwanụ ndị ọzọ okwu amamihe a. Na-abụnụ abụ ọma na abụ na-ebuli mmụọ elu. Na-abụkunụ Onyenwe anyị abụ ndị a site nꞌobi jupụtara nꞌekele. Ka ihe nile unu na-eme, ya na okwu unu na-ekwu, bụrụ nke e mere na nke e kwuru site nꞌaha Onyenwe anyị Jisọs. Jirikwanụ obi ekele bata nꞌihu Chineke bụ Nna anyị site nꞌaha Kraịst.
1 KỌRINT 15:57
Ka ekele dịrị Chineke nꞌihi ihe ndị a. Nꞌihi na ọ bụ Chineke nyere anyị mmeri site na Jisọs Kraịst.
Unu echegbula onwe unu banyere ihe ọ bụla. Kama nꞌihe nile, sitenụ nꞌekpere na arịrịọ, ya na ekele, chee ihe nile na-akpa unu nꞌihu Chineke.
2 KỌRINT 9:15
Ka anyị kelee Chineke ekele nꞌihi onyinye ahụ ọnụ na-apụghị ịkọ o nyere anyị.
na ndị na-ekele Nna anyị ekele mgbe nile, nꞌihi na o mere ka anyị bụrụ ndị kwesịrị iketa oke nꞌihe nile ahụ o mere ka ọ bụrụ nke ndị ahụ bi nꞌalaeze nke ìhè.
Onyinye ọ bụla dị mma, na nke zuru oke na-esite nꞌeluigwe abịa. Ọ na-esite nꞌebe Chineke dị ukwuu nke eluigwe, onye kere ihe nile na-abịa. Chineke enweghị oge ọ na-agbanwe, nꞌihi na ọ dịghị ka onyinyo mmadụ nke na-agbanwe agbanwe.
“Anyị na-enye gị otuto, gị Onyenwe anyị, Chineke, Onye pụrụ ime ihe nile. Onye na-adị site na mmalite, onye dịkwa ugbu a, nꞌihi na i werela ike nile nꞌaka gị. Ị malitekwala ọchịchị gị.
Anyị na-ekele Chineke ekele mgbe nile, na-echetakwa unu nꞌekpere anyị.
1 TIMỌTI 2:1-2
 Ihe mbụ m na-adụsị gị ọdụ ike ka i mee bụ nke a. Na-ekpesịrị ndị ọzọ ekpere ike. Rịọ arịrịọ ka Chineke meere ha ebere. Nꞌime ekpere gị nile na-enyekwa Chineke ekele nꞌihi ihe ọ ga-emere ha. Kpeekwara ndị eze ekpere, ha na ndị nile nọ nꞌọnọdụ dị elu, ma ọ bụ ndị na-achị anyị. Ka anyị nwee ike ibi ndụ udo na nke ịdị nwanyọọ, jiri oge anyị nile na-ebi ndụ ịsọpụrụ Chineke, na nke ime ezi omume.
Mgbe ahụ ha bupụrụ nkume ahụ. Jisọs lere anya nꞌelu kpọkuo Chineke sị, “Nna, ekelee m gị nꞌihi na ị na-anụ olu m.
2 KỌRINT 9:11
Ọ ga-emekwa ka unu bụrụ ndị ọgaranya mgbe nile, ka unu nwee ihe ga-ezuru unu na nke unu ga-enye ndị ọzọ mgbe nile. Mgbe ndị ọzọ sitere nꞌaka anyị nata onyinye unu, ha nile ga-enye Chineke ekele nꞌihi inyeaka unu nyere ha.
Nꞌihi na Chineke kere ihe nile. Ihe nile na-adịkwa ndụ site nꞌike ya. Ihe nile dịkwa inye ya otuto. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi! Amin.
ỌLU OZI 16:40
Mgbe ahụ Pọl na Saịlas laghachiri nꞌụlọ Lidia. Ọtụtu ndị kwere ekwe bịakwutere ha. Pọl na Saịlas gwara ha okwu Chineke. Emesịa, ha hapụrụ obodo ahụ.